दशगजामा रहेका दश जनाको मात्रै ‘टेष्ट’ ! – sunpani.com
दशगजामा रहेका दश जनाको मात्रै ‘टेष्ट’ !
सुनपानी । २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – बाँकेको दशगजामा बनाइएको क्वारेन्टाइन (टेन्ट) मा बसेका एक सय ८१ जनामध्ये दश जनाको मात्रै स्याम्पल जाँच भएको छ ।
ज्वरो आएर अस्पताल ल्याइएका दश जनाको टेष्ट गरिएको हो । सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । बसेका जति सबैको स्याम्पल जाँच हुन सकेको छैन । त्यहाँमात्रै होइन, अन्यत्रको पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाजतिको स्याम्पल जाँच हुन सकेको छैन ।
बाँकेमा अहिलेसम्म ७० जनाको स्याम्पल जाँच भएको छ । त्यसमध्येमा ६४ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ । बाँकी ६ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेका अधिकृत नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
रुपन्देहीमा जाँच हुन थालेपछि बाँकेबाट स्याम्पल पठाउने संख्या बढेको छ । नतिजा छिटो पनि आएको छ । भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा जाँच शुरु भएपछि यहाँको सबै जाँच केही दिनमै सकिने विश्वास गरिएको छ । अस्पतालका मेसु डा. प्रकाश थापाले एक हप्ताभित्र भेरीमा जाँच शुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।